सुनले भरिएको उल्का पृथ्वीको नजिक : पृथ्वी भरिकै अमुल्य चीज कहाँ खस्छ ? – Nep Stok
सुनले भरिएको उल्का पृथ्वीको नजिक : पृथ्वी भरिकै अमुल्य चीज कहाँ खस्छ ?
पुष २, २०७८ शुक्रबार 193
काठमाडौ । नासाले एउटा नयाँ उल्कापिण्ड ‘गोल्डमाइन एस्टेरोइड’ पृथ्वीको नजिक आउने बारे विशेष खुलासा गरेको छ । यस उल्कापिण्डको विशेषता यो हो कि यो सुनको खानी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो पनि भनिएको छ कि सुन मात्र होईन, तर यो उल्का धेरै अन्य कीमती धातुहरु ( बहुमूल्य धातुहरु संग क्षुद्रग्रह पूर्ण ) ले भरिएको छ। यसको एक सानो टुक्रा को लागत अरबौं र ट्रिलियन भन्दा बढी भनिएको छ।
पृथ्वी बाहेक सौर्यमण्डलमा धेरै ग्रहहरु छन्। त्यस्तै, वर्षौंदेखि, वैज्ञानिकहरु कुनै एक ग्रह को लागि खोजिरहेका छन् जहाँ अक्सिजन र पानी को उपस्थिति को सम्भावना छ। तर अहिलेसम्म यस्तो कुनै ग्रह पत्ता लागेको छैन। जे होस्, त्यहाँ अन्य ग्रहहरु को तुलनामा मंगल ग्रहमा जीवनको धेरै सम्भावनाहरु छन्।
हाम्रो सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहहरु बाहेक उल्कापिण्डहरु पनि घुमिरहन्छन्। अब नासाले बताएको छ कि १२४ माईल चौडा उल्कापिण्ड ‘गोल्डमाइन एस्टेरोइड’ हाम्रो सौर्यमण्डलमा घुमिरहेको छ, जसको मूल्य अरबौं खरबौ भन्दा बढी छ। यो उल्का धेरै बहुमूल्य धातुहरुसँग भरिएको छ।
वैज्ञानिकहरु यस टुक्राको बारेमा धेरै अनुमान लगाएका छन्। उनका अनुसार त्यहाँ धेरै बहुमूल्य धातुहरुको थुप्रो छ। यसमा सुन, चाँदी, फलाम र निकल सामेल छन्। यसको मूल्य अरबौं मा अनुमान गरिएको छ। नासाका वैज्ञानिकहरुका अनुसार चाँडै नै थाहा हुनेछ कि यो उल्का टुक्रा को स्रोत के होरु वर्तमान मा, ‘Psyche 16 asteroid’ पृथ्वी बाट २०० मिलियन माइल टाढा छ। तर २०२६ सम्म, यसको बारे मा अधिक जानकारी लिईनेछ।
Prevपहिलो पटक सुँगुरको मृगौलालाई मानवका लागि जोडे, यसले गर्यो झनै राम्रो काम !
Nextधनवान बनाउने २० शुभ सपना :
तेश्रो लहर सुरु भयो भन्दै यी हुन् सीसीएमसीको १३ बुँदे निर्णय, अब के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइदैन ?
यी नर्स जसले ५ हजार जनालाई सुत्केरी गराइन् तर आफै सुत्केरी हुँदा संसार छाडिन्
प्रहरी हि’रासतमा रहेका पल शाहलाई गैंडाकोट पुर्याइयो